၂၀၂၁ နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာသောရေကူး ၀ တ်စုံ - ဖက်ရှင်
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေး စိတ်ဖိစီးမှု၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အရေပြား ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အိန္ဒိယ ဆံပင် ကျွမ်းကျင်သူကိုမေးပါ နိုင်ငံတကာ
ဖက်ရှင်အယ်ဒီတာတစ် ဦး ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာသောရေကူး ၀ တ်စုံ
ကလိုရင်း၊ နေရောင်ကာကွယ်မှု၊ ချွေးနှင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်များအကြားတွင် bikini အသစ်၊ tankini (သို့) တဖဲ့ (အသစ်မည်မျှပင်ချစ်စရာဖြစ်ပါစေ) အသစ်တစ်ခုကိုငွေတစ်တန်ချရန်အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါ။ လူတိုင်းအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာ, တတ်နိုင်တဲ့များပြားလာတယ် ရေကူးဝတ်စုံ သူတို့ရဲ့ pricier အပေါင်းအဘော်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောနည်းနည်းချော့မော့, အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ပျော်စရာဖြစ်ကြသည်။ အကွက်များအားလုံးကိုစစ်ဆေးသောဘတ်ဂျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဝတ်စုံ ၂၂ မျိုးကိုလတ်ဆတ်သောသစ်သီးဝလံတွင်ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားရှိပါသည် နှင့် သင်၏အပိုငွေကိုရေကူးကန် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သိမ်းဆည်းပါ။ Heck, ရှေ့သွားနှင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဝတ်စုံသစ်ကိုတက်ဖမ်းယူ။
သက်ဆိုင်သော: နွေရာသီ 2021 သည်ကြီးမားပါလိမ့်မယ်ဒါက6ရေကူး Trends
၁။ CUSPHE V လည်ပင်းတစ်ခုလုံး
ဒီဈေးသက်သာတဲ့ဒီဈေးကြီးတဲ့ဝတ်စုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်သူများကအောက်ခြေအပြည့်နဲ့အပြည့်အ ၀ စီထားတဲ့အလယ်တန်း (အဖုအပိမ့်များကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်း) ရှိသည်ဟုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုကြသည်။ ပြောစရာမလိုပါဘူး၊ ဒီ Ruffles တွေကဒီထက်ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့အပေါ်ကိုအနည်းငယ်တက်နေတဲ့နေရာအနှံ့မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။ နှင့်အညီ, ဟုတ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းအနက်ရောင်လာပါတယ်။
အရွယ်အစား XS မှ XXL ရရှိနိုင်ပါ
Kitty နှင့် Vibe
၂။ Kitty နှင့် Vibe Scoop Top နှင့် High-Waisted Bottom
သင့်ခါးနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးတိုင်းတာမှုများအပြင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့် Bum ၏ပုံသဏ္takesာန်ကိုယူထားသော Kitty နှင့် Vibe ၏ထူးခြားသောအရွယ်အစားစနစ်သည်အလွန်မြှုပ်နှံထားသောပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့အမှတ်တံဆိပ်ကခင်ဗျားလုံးဝတပ်မက်မက်မောတဲ့ပုံနှိပ်စက်အသစ်တွေကိုပဲဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီကအီတလီသို့အပန်းဖြေရန် (သို့မဟုတ်၊ အိမ်နောက်ဖေးရှိနေရောင်ခြည်မှနေရောင်ခြည်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်) ပြီးပြည့်စုံသောခံစားမှုမျိုးဖြင့်ရနိုင်သောရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသောသံပုရာဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ FYI, ဤပုံစံများကို (၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော) ဤချစ်စရာကောင်းသောကောင်မအစက်များနှင့်ယခုနွေရာသီအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်သောအပြာရောင်ပန်းရောင်တို့အပြင်ရရှိနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၅၂)
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၄၆)
အရွယ်အစား A မှ G မှ ၀ သို့ ၂၆ အထိရနိုင်သည်
L.L. Bean ကို
3. L.L.Bean ရင်ပြင် - လည်ပင်းတစ်ခုမှာ
ရင်ဘတ်လည်ပင်းနှင့်ပုံနှိပ်ထားသည့်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းက၎င်းကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ရေကူးဝတ်စုံကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် UPF 50+ တွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့်ရေကန်အနားမှမည်မျှကြာမြင့်စွာနေနေရသော်လည်းနေရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ခံရသည်ဟုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုံလောက်သောအပိုင်းအစတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေရသောရှည်လျားသောကိုယ်ထည်ရှိသူများအတွက်လည်းရှည်လျားသည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၉)
အရွယ်အစား4မှ 18 ရရှိနိုင်ပါသည်
4. Xhilaration အပြာရောင်အစင်းဇာ -Up Bikini
ရိုးရိုးအဖြူနှင့်အဖြူရောင်အဖြူရောင်အဖြူရောင်အစင်းများသည်ရွက်လွှင့်ရန်ကြိုးနှင့်အတူဒီဝတ်စုံကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် Target တံဆိပ်ရဲ့အောက်ခြေနှင့်အောက်ခြေနှစ်ခုစလုံးဟာသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှကြိုး bikini ထက်ပိုမိုလွှမ်းခြုံမှုကိုပေးသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် dowdy သို့မဟုတ် matronly ရှာဖွေနေ။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၅)
အရွယ်အစား XS မှ XL နှင့် D-cup တွင်ရနိုင်သည်
5. Summersalt အဆိုပါ Sidestroke တစ်ခုတည်း
Summersalt သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်နိုင်သည့်အရည်အသွေးမြင့်စူပါလှပသောရေကူးဝတ်စုံများကိုကောက်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း Sidestroke တစ်ခုသည်ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးပုံစံဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အရောင်းရဆုံးရောင်းအားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်၎င်း၏ပါးလွှာပြီးပျော်စရာသုံးရောင်စုံဒီဇိုင်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားမှုတွင်မှန်ကန်သောအမှာစာကိုသေချာစွာမှာယူရန်သေချာစေရန်ပြည့်စုံသောအရွယ်အစားလမ်းညွှန်အတွက်ဖြစ်သည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၉၅)
အရွယ်အစား0မှ 24 အထိရရှိနိုင်ပါသည်
၆။ Lulus Sunnyside သံချေး or Orange Bikini Top နှင့် Bikini Bottom
ပိုကြီးတဲ့စည်ကားမှုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝတ်စုံတွေအကြောင်းအများကြီးပြောကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် A-cup လူစုလူဝေးကော။ ဒီ Lulu ရဲ့ထိပ်မှာတွေ့ရတဲ့တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေတဲ့ဒီareaရိယာမှာအသံအတိုးအကျယ်နဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မယ်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၃၂)
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၉)
အရွယ်အစား XS မှ XL ရရှိနိုင်ပါ
၇။ Tempt Me High Neck Plunge Mesh Ruched One Piece
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာငါတို့ဟာဒီစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဝတ်စုံကိုနွေရာသီရဲ့ 'Amazon Coat' အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီးအဲဒီအချိန်ကစပြီးပိုကောင်းလာတယ်။ ယခုအခါတွင်အရောင် ၃၉ မျိုးရွေးချယ်နိုင်သည်၊ မူရင်း ၁၃ မှအဆင့်အထိဖြစ်သည်။ အချို့သောစတိုင်များအတွက်ဒေါ်လာ ၂၈ မှ ၃၂ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်နေချိန်တွင်အခြားသူများကသင့်ကို ၁၄ ဒေါ်လာသာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
အမေဇုံမှာ $ 32
အရွယ်အစား XS မှ 22 Plus အားအတွက်ရရှိနိုင်
၈ ။ CUPSHE ပန်းပွင့်အောက်ခြေရှိ Bikini ကိုထုပ်သည်
အစိုင်အခဲအရောင်တောက်ခြင်းနှင့်ပုံစံသို့မဟုတ်ပိုအသေးစိတ်အောက်ခြေကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်သူတို့၏စည်၊ ပခုံးများသို့မဟုတ်အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့်သူတို့၏တင်ပါးသို့မဟုတ်ဘုံသို့တိုးမြှင့်ပေးလိုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Plus အား, ဒီ Cupshe စတိုင်ပေါ်တွင်ပုံသွင်းခွက်များနှင့်ထူသော banding ပိုမိုကြီးမားသောတွေဆီကနေလုံလောက်သောထောက်ခံမှုပေးထားတယ် ... အားလုံးရုံ $ 27 ။
အမေဇုံမှာ $ 29
ဤသိမ်မွေ့သော sexy ဝတ်စုံသည် underwire ရှိကောင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ညှိနိုင်သောကြိုးများနှင့်အပျော့ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘရာစီယာခွက်များသည်ကြီးမားသော Boob များရှိသူများပင်သူတို့သည်ကမ်းခြေသို့မဟုတ်ရေကန်ရှိကလေးတွေနှင့်အတူတစ်နေ့တာလိုအပ်သည့်အထောက်အပံ့ကိုရရှိစေသည်။ ၎င်းသည် Power Mesh tummy-control အထည်နှင့်ချောမွေ့သော silhouette ကိုဖန်တီးရန်အပြည့်အဝစီထားသည်။ ထို့အပြင်အဖြူထည်သည်ရုတ်တရက် X-rated ဖြစ်လာသည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ ရေကူးချိန်မည်မျှပင်ပျော်ပျော်ပါးပါးနေရမည်ကိုထိုတူညီသောနံရံကသေချာစေသည်။
ဝယ်လိုက်ပါ ($ 109;ဒေါ်လာ ၄၉)
အရွယ်အစား4မှ 26 ရရှိနိုင်ပါသည်
10. ZAFUL လည်စည်းဆိုးဆေးမြင့်မားသောခြေထောက် Tank Bikini Knotted
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလည်စည်းဆိုးဆေးတပ်ခြင်းသည်မကြာမီအချိန်မရွေးတက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသသည်။ ထို့ကြောင့်သင်မလုပ်သေးလျှင်သင်သည်ရေကူးဝတ်စုံစုဆောင်းမှုကိုဤနည်းအတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဒီတင့်ကားစတိုင်ရှစ်ရောင်ရှိပါတယ်။ နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးရောနှောဖို့နဲ့အနည်းငယ်ကိုက်ညီဖို့အနည်းငယ်ခူးဖို့သွေးဆောင်ခံထားရတဲ့ပေါင် ၁၅ ပေါင်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်။
အရွယ်အစား S မှ L ကိုရရှိနိုင်ပါ
သက်ဆိုင်သော: ငါအမေဇုံမှဒေါ်လာ ၁၆ ဒေါ်လာဝယ်သည့်ဝတ်စုံကို ၀ ယ်လိုက်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်တကယ်ကောင်းသည်
11. La Blanca Halter One-Piece Swimsuit
ဒါကရှေ့မျက်နှာကစူပါအခြေခံအပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့တူရင်တောင်ဟက်တာနဲ့လည်ပြန်ကျဆင်းသွားတာကဒီ peachy ဝတ်စုံကို sexy ထိစေတယ်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမပြုရကမထင်ရှားစေဘဲထောက်လှမ်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ပန်းရောင်အရိပ်ထဲမကျဘူးလား ဒီနံပါတ်ကိုလာတယ် အနက်ရောင် နှင့် အပြာနုရောင် လည်း။
အခုဝယ်ပါ ($ 99;ဒေါ်လာ ၆၀)
အရွယ်အစား0မှ 16 ရရှိနိုင်ပါသည်
Wildgarden ရှိ Madewell ဒုတိယလှိုင်း Retro High-Waisted Bikini Bottom
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ Madewell ဝတ်စုံကိုယူဆောင်လာသည့် retro နှင့်တကယ့်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်သာပျော်ဝင်နေကြသည်စားပွဲတင်ကမ်းခြေ။ အပေါ်နှင့်အောက်ကိုသီးခြားစီရောင်းချခြင်းကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိုက်ဖက်သောအရာကိုရှာဖွေရန်အရွယ်အစားကိုသင်ရောနှော။ ကိုက်ညီနိုင်သည်။
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၄၅;ဒေါ်လာ ၃၄)
အရွယ်အစား XXS မှ XXL ရရှိနိုင်ပါ
13. ASOS DESIGN Fuller Bust သည်ရေကူးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားသည်
ASOS မှချစ်စရာကောင်းသောဝတ်စုံသည်ခွက်နှင့်စားဆင်ယင်အရွယ်အစားအရအရွယ်အစားရှိသည်။ ၎င်းသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိသူများကိုပိုမိုကြီးမားသောбюများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိကဘာကိုထူးခြားသလဲဆိုတာမသေချာပါဘူး။ ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့ဘေးချင်းဆက်စပ်မှု၊ ပန်းအလှဆင်ခြင်း၊ အထောက်အကူပြုသော်လည်းကျယ်ပြန့်ခြင်းမရှိသောပခုံးကြိုးများသို့မဟုတ်သင့်ကိုဒေါ်လာ ၅၀ အောက်သာပေးရမည့်အချက်။ ။
အရွယ်အစား 0E မှ 14G အထိရနိုင်သည်
(၁၄) Aerie Waffle သည်ပခုံးတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အမြင့်နှင့်အမြင့်ခါးပါသည့်ဘစ်ကီနီအောက်ခြေရှိသည်
၂၀၂၁ အတွက်နောက်ထပ်ကြီးမားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာချည်ထည်များဖြစ်သည်။ (မပြောသင့်သည်မှာ၊ ဤလုပ်ကြံဖန်တီးမှုများသည်အနည်းငယ်ပိုမိုခိုင်ခံ့သည်၊ သို့ဖြစ်ရာရေကန်ကုန်းပတ်၏အုတ်ခဲများကြောင့်၎င်းတို့ချက်ချင်းပျက်စီးသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ) သင်သည်ဤမျဉ်းကြောင်းကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမလား တစ်ခေါက်ပုံစံ သို့မဟုတ်တစ် ဦး ကြိုက်နှစ်သက်သည် ထိုးတြိဂံဖြတ် ရန် High- ဖြတ်အကျဉ်း ဒါမှမဟုတ် cheeky အောက်ခြေအရက်သောက် , Aerie ရဲ့သူတို့ waffle ထည်ထဲမှာထွက်စစ်ဆေးရန်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီမော်ဒယ်တွေဟာကျန်တဲ့ငါတို့လိုပဲ cellulite, ဝက်ခြံနဲ့ underarm ဆံပင်ရှိတာကိုသင်နှစ်သက်နိုင်ပါတယ်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၄၀)
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၃၀)
အခြား Amazon ၏အရောင်းရဆုံးအရောင်းဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သောဤ halter လည်ပင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးမျိုးရှိအမျိုးသမီးများမှကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သုံးသပ်ချက် ၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်အရွယ်အစားကြီးကြီးမားမားရှိရန်အကြံပြုသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သူအများစုက၎င်းသည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်သွားရန်သဘောတူသည်။ သိုင်းကြိုးများနှင့်အလယ်အစင်းများသည်သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ထို့ကြောင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်များထဲသို့မ ၀ င်ခင်တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်ပေါ်လာသည့်အစင်းများပေါ်မှနေရောင်ကာကွယ်ရန်အပိုအသုံးပြုပါ။
အမေဇုံမှာ $ 33
အရွယ်အစား S မှ XXL မှရရှိနိုင်ပါသည်
၁၆။ AVENGER SASHI WHITE HALTER BIKINI အားလုံးအတွက်ရေကူးဝတ်စုံများ
ဤရိုးရှင်းသောအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဟန့်တားမှုသည် Swimsuits For All တွင်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြန်လာရန်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ဆွဲအိတ်နှင့်လည်ပင်း၌ကြိုးနှစ်ချောင်းအောက်ရှိထူသောတီးဝိုင်းသည်ဘရာစီယာကဲ့သို့အမှန်တကယ်မပါဘဲပိုမိုကြီးမားသောအနှောက်အယှက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ လေ့လာသူများသည်အောက်ပိုင်းခါးပတ်အားအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောပရိသတ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ ‘50-esque မြင့်မားသောခါးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအရပ်သို့ tucked အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရုံအလုံအလောက်တက်တတ်၏။ အိုး, ဒါကြောင့်သင်ကရှေ့ဆက်သွားနှင့်ရုတ်တရက်လုံးဝသက်သက်ဖြစ်လာသင့်ရဲ့ရေကူးဝတ်စုံကိုကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲညာဘက်၌ရေငုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြည့်အဝစီတန်းပါတယ်။
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၉၀;ဒေါ်လာ ၄၉)
အရွယ်အစား4မှ 24 ရရှိနိုင်ပါသည်
17. အင်ဒီ The Paloma Eco
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး၊ များသောအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းအတွက် Andie ဝတ်စုံကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ပါသည် long-torso အရွယ်အစားရွေးချယ်စရာများ ။ အများစုကဒေါ်လာ ၉၅ ၀ န်းကျင်ရှိပေမယ့်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဖို့ကျိန်းသေရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့အရွယ်အစားနဲ့နှစ်သက်တဲ့အရောင်ကိုရှာတဲ့အခါအမြန်ပြုလုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်၊ အခုအချိန်မှာငါတို့တွေအားလုံးဟာဒီအရည်ရွှမ်းတဲ့သရက်သီးအရိပ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းထားသည့်အပြည့်မျက်နှာပြင်နှင့်တင်ပါးဆုံရိုးအောက်ခြေကျဉ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုနှင့်အတူသင်လိုချင်သည့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုလုံခြုံနိုင်သည့်ကျောကြိုးတစ်ချောင်းနှင့်ပါ။ အိုး၊ BTW သည်၎င်းကို ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းသောပြန်လည်အသုံးပြုထားသော polyester ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၉၅;ဒေါ်လာ ၈၆)
အရွယ်အစား XS မှ XXXL တွင်ရနိုင်သည်
သက်ဆိုင်သော: Long Torsos နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Swimsuit အမှတ်တံဆိပ် ၇ ခု
18. Old Navy Ruched နက်ရှိုင်းသော V-Neck One-Piece
ဒီနေရာမှာတစ်ခုကအပိုင်းအစတွေဟာချောချောမွေ့မွေ့၊ sexy နဲ့ပျင်းစရာကောင်းတာကအဝေးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေပြပါ။ ကျားသစ်ပုံနှိပ်ဒီဇိုင်း၏နက်ရှိုင်းသော V မျက်နှာပြင်သည်အပြည့်အဝညှိနိုင်သောသိုင်းကြိုးများကြောင့်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ အင်ပါယာ၏ခါးနှင့်ဘေးပတ်လည်သည်သင့်ကွေးတိုင်းကိုချော့မော့လိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခွက်များသည်အပို bust အထောက်အပံ့များပေးလိမ့်မည်၊ UPF 40 သည်အပိုနေရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မည်။
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၄၅;ဒေါ်လာ ၃၀)
Boyshorts နှင့်အတူ 19. Century Star Floral Tankini
Tankinis များသည်မကြာခဏဆိုးရွားသည့်ရက်ပ်ကိုရလေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်စတိုင်၏ပရိသတ်ကြီးများဖြစ်ကြပြီးတစ်ပိုင်းနှင့်တူညီသည်။ သို့သော် ၀ တ်ဆင်ရန် (နှင့် ၀ တ်နေစဉ်ရေချိုးခန်းကိုသုံးရန်) အကန့်အသတ်ဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒီအထူးဝတ်စုံကနှစ်ဖက်စလုံးမှာအရေပြားအရိပ်အမြွက်ပြသထားပြီးရေထဲကိုရောက်တာနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကိုရေပေါ်မျောပါသွားအောင်တားဆီးပေးဖို့အတွက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ elastic bottom band ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင်အောက်ခြေသည်ခါးကိုမတူးရန်တားဆီးနိုင်ရန်ချိန်ညှိနိုင်သောဘေးပတ်လည်များရှိပြီးလိုအပ်သည့်အတိုင်းလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလည်းခေါက်ထားသည့်အပေါ်မှကြိုးများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
အရွယ်အစား2မှ 16 ရရှိနိုင်ပါသည်
20. MADAME EVERGLADE HIGH WAIST BIKINI လက်အောက်တွင်
ရေကူးခြင်းလမ်းကြောင်းအများစုမှာဒီရေကဲ့သို့စီးဆင်းသွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်စွန်ပလွံပင်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းအတွက်တည်းခိုရန်အလောင်းအစားလုပ်လိုသောပုံစံဖြစ်သည်။ ကြာရှည် အချိန်။ ချောမွေ့စွာဖြင့်ချည်နှောင်ထားသောအနိမ့်အမြင့်များဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောဝတ်စုံအသစ်များကို ၀ ယ်ယူလိုသူများအတွက်ဤသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် underwire bikini ကိုအနိုင်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၈;ဒေါ်လာ ၄၅)
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၃၆;ဒေါ်လာ ၁၈)
21. Calvin Klein Pleated One-Piece swimsuit
$ 80 မှာဒီဟာသေချာတာကဒီစာရင်းမှာစျေးအသက်သာဆုံးရေချိုးခြင်းဝတ်စုံမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ထိုက်တန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်ဂန္ထဝင်နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောလွှမ်းခြုံမှုရှိသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ စတုရန်းလည်ပင်းမှသည်လေးထောင့်လေးများအထိရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့်ရှေ့မှောက်၌ချုပ်ထားသောအရောင်များရှိသောပစ္စည်းများအထိဤတွင်ချစ်ရန်များစွာရှိသည်။ ထိုဂန္အရောင်များ? ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့အကြောင်း။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၈၀)
22. အစိုင်အခဲ + အစင်း Morgan စင်း Bikini
ဤစာရင်းသည်ရေကြောင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောဒုတိယရေကူးစက်ဘီးဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိသော်လည်းပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ ၎င်းသည် strimp တြိဂံထိပ်တစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီရန်ကြိုးအောက်ခြေတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးအနည်းငယ် skimpier ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Solid + Stripe ဝတ်စုံများသည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်ကုန်ကျသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဤနှစ်၏ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုရောင်းမည်ဆိုပါကပုံ ၃ ပုံအောက်တွင်သာတွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၉;ဒေါ်လာ ၄၇)
ဝယ်လိုက်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၉; ဒေါ်လာ ၄၇)
အရွယ်အစား XS မှ L ကိုရရှိနိုင်ပါ
Categories Celeb စတိုင် လိင်ကိုချစ်တယ် အပြင်အဆင်